आजको राशिफल : बि.स.२०७४ फाल्गुन २८ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१८ मार्च १२ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ । - eKhojkhabar
आजको राशिफल : बि.स.२०७४ फाल्गुन २८ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१८ मार्च १२ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।
क्यालीफोर्निया – बि.स.२०७४ फाल्गुन २८ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१८ मार्च १२ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ । साधारण संवत्सर । उत्तरायणं । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९३९ । चैत्र कृष्णपक्ष । तिथि दशमी,१२ घडी ५६ पला, बिहान ११ बजेर ३० मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र पूर्वाषाडा,९ घडी १५ पला,बिहान १० बजेर २ मिनेट उप्रान्त उत्तरषाडा । योग वरियान ३६ घडि ५१ पला,बेलुकी ९ बजेर ४ मिनेट उप्रान्त परिध । करण भद्रा,बिहान ११ बजेर ३० मिनेट उप्रान्त वव,रातको १२ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त वालव । आनन्दादिमा उत्पात योग । चन्द्रराशि धनु,बेलुकी ४ बजेर ४१ मिनेट उप्रान्त मकर ।
काठमाडौंमा सूर्योदय ६ बजेर १९ मिनेट,सूर्यास्त बेलुका ६ बजेर १० मिनेट । दिनमान २९ घडी ३६ पला ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) शरिर स्वस्थ्य नहुनाले दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् । कामका सवालमा बिभिन्न बिशिष्ट व्याक्तित्वहरु सँग बिवाद हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । सरकारी काममा सेवा प्रभाव गर्नेहरुले समयमा काम नगर्दिनाले बिभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ । साझपखको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागि भई समाजको काम गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना भावना साटासाट गर्न सकिनेछ ।
शुभ अंक — १,७ शुभ दिशा — दक्षिण
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वा) तपाईले सुरु गर्नु भएको काममा आफ्ना भन्नेहरुले नै बाधा तथा अवरोध गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला । समय र परिस्थितिको अध्ययन नगरि अरुको कुरामा दोडनाले दुख पाईनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला अप्रिय घटना नहोला भन्न सकिन्न । माया प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले नचाहादा नचाहादै टाडिनु पर्नेछ । साझपख अन्य क्षेत्र मध्ययम रहेपनि बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि सुरक्षित हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
शुभ अंक — २,५ शुभ दिशा — पुर्वं
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) समयमा कामहरु सकिने हुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्ने तथा लगानि गर्ने बाताबरण बनाउँन सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ भने व्यापारकै शिलशिलामा देश बिदेशको यात्रा गर्न सकिनेछ । मन मरेको मानिस तथा जीवन साथिको सहयोगले उपलब्धिमुलक कामहरु सम्पादन गर्न सकिने हुँदा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँने समय रहेकोछ । पढाई लेखाईमा मेहनेत गरे भन्दा राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । साझपखको समय मध्ययम रहेकोले कुनै काम गर्दा वा भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्दा ध्यान समय मध्ययम रहेकोलेछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) अधिकार प्राप्तिको लागि गरिने संघर्षमा बिपक्षहिरुलाई हराउदै निर्णायक तहमा पुगिनेछ । बादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धाको लडाईमा प्रतिश्पर्धिहरुले निर्बिरोध तपाईको समर्थन गर्नेछन् भने सामाजिक काम गरि अरुको मन जित्न सकिनेछ । काम गर्ने शैलि परिवर्तन गरेर आम्दानिका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । ब्यापारिक कुल घरानका मानिससँग भेटेर नयाँ योजना बनाउन सकिनेछ भने आफन्त तथा साथिभाईहरुको उत्साहजनक समर्थन रहने छ । महत्वपुर्ण कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गर्दा तत्कालका लागि खर्च भने बढ्ने देखिन्छ ।
सिहं(मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) समय तालिका अनुशार नचल्नाले दुख पाईनेछ भने अरुकै काममा समय बित्नेहुदा आफ्नो काम थाति रहनेछ । तपाईको सिर्जना तथा लेख रचनाहरु अरुले प्रयोग गरि फाईदा लिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भएपनि न्यून पारिश्रमिक पाउदा मन खिन्न हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय दिएमात्र आम्दानि गर्न सकिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रमो लगानिबाट सन्तोषजनक आम्दानि गर्न सकिनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना भावना साटासाट गर्न सकिनेछ ।
कन्या(टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) सवारि साधन तथा घर जग्गाको खरिद बिक्रिबाट केहि मात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । व्यावस्थापन ज्ञानको कमिले आर्थिका कारोबार बिग्रने सम्भावना रहेको छ । आत्मिय मित्र तथा आमा सँग छुट्टिएर लामो दुरिका यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । कृषि,सहकारि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरि आम्दानिका स्रोत बढाउँन सकिनेछ भने अरु व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । पढाई लेखाईमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि अरुदिन भन्दा बढि मेहनेत गर्नुपर्नेछ ।
तुला(रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) परिवारमा लामो समय लेखि भेटघाट भएका मानिससँग भेट्न पाउँदा आत्मिय भाव बढ्नेछ भने रमाईलो बाताबरणमा दिन कटाउँन सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकिसँग मिलेर गरिने व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुँनाले आर्थिक रुपमा एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । छोटो दुरिको उपलब्धिमुलक यात्राको तय गर्न सकिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा मन जाने हुँनाले परिणाममुखि नतिजा ल्याउँन सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँने छन् बिवादित बिषयहरु समाधान भएर जानेछन् । साझपख समय मध्ययम रहेकोले कुनै काम नगर्नुनै राम्रो रहनेकोछ ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमाा दिईएको समयबाट भनेजस्तो नतिजा नआउँने हुँदा मन चिन्तित हुनेछ । सानो कामलाई पनि प्रशस्त समय दिनु पर्दा दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् । उठ्नु पर्ने रकम नउठ्नाले नयाँ काम गर्ने अवसरबाट टरेर जानेछ । अप्रिय समाचारले निरास बनाउनेछ भने माया प्रेममा मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकाले छोटो तथा रमाईलो यात्रा हुनेछ । व्यापार व्यावासायमा लगानि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ ।
शुभ अंक — ४,८ शुभ दिशा — पश्चिम
धनु(ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) राजनिति तथा समाजसेवामा दिएको समयबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ भने पद प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय राम्रो फस्टाएर जाने तथा आम्दानि प्रशस्त हुनेछ । आफन्त तथा घर परिवारका माानिसबाट सहयोग तथा समय अनुकुल सल्लाह पाईने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ । प्रणय सम्बन्धको बिकास हुनेछ भने साथिभाई सँगको सम्बन्धमा आत्मियता बढ्नेछ । पढाई लेखाईलाई समय अनुकुल अगाडि बढाई नतिजा हात प्रार्न सकिनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले खानपिनमा बिशेष ध्यान दिनुहोला ।
मकर(भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) अध्ययनमा बिद्यार्थि वर्गहरुले अल्छि गर्नाले चाहेजस्तो सफलता प्राप्त नहुँन सक्छ । व्यापारमा समय लगानि गर्नेहरुका लागि बिदेशमा उत्पादन भएका सामानहरुबाट प्रशस्त आम्दानि हुनेछ भने स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापारमा मन्दि आउँनेछ । माया प्रेम तथा पति पत्निबिच एक अर्काको भावना बुझ्न नसक्दा केहि समय अलग हुँने पर्ने बाध्यता आउँनेछ । साझपख समय समय राम्रो रहेकोले राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको सहयोग तथा समथन पाईनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ ।
शुभ अंक — २,६ शुभ दिशा — पुर्व
शुभ रंग — सेतो कार्य सिद्धि मन्त्र — ॐ कालभैरवाय नम
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थको कारोबार फस्टाएर जानेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथिको सहयोग पाईनेछ । पढाई लेखाईमा अग्र स्थानमा तपाईमा तपाईको नाम आउनेछ भने प्रतिपष्पर्धि आफै किनारा लाग्नेछन् । मेहनेत तथा लगनशिल भएर काम गर्नाले समाजमा राम्रो मुल्याङकन हुनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन प्राप्त हुने हुदा पद प्राप्त हुने योग रहेकोछ । साझपख लामो दुरिको यात्रा हुनेछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि समयले साथ लिनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) पढाई लेखाईमा मन जाने तथा रुचिको बिषयमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथिसँग रमाईलो स्थानको भ्रमण गर्न सकिनेछ । थोरै समयको प्रयत्ने सहजै गन्तब्य तथा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ । अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सकिने तथा भविश्यको लागि फाईदा हुने काम गर्ने बाताबरण बनाउन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने कामकै सवादमा समाजका बिशिष्ट व्याक्तित्वहरु सँग भेटघाट हुनेछ ।
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल चैत्र ५ गते सोमबार
राशिफल / वि.सं. २०७४ चैत्र ०४ गते आइतबार
आजको राशिफल : बि.स.२०७४ चैत्र ०३ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०१८ मार्च १७ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।
बि.स. २०७४ साल चैत्र २ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ मार्च १६ तारीखको राशिफल
कस्तो रहन्छ तपाईको चैत महिना ? हेर्नुहोस मासिक राशीफल
यौन सम्पर्क गर्ने धेरै तरिका छन् तर पनि महिलाहरूलाई मन पर्ने सेक्स पोजिसन यस्ता छन्
मेरो बुढीलाई धेरै गरिरहनु पर्ने भयो,मैले सकिन,के गर्ने होला (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
हातको चक्र र शङ्ख हेरेर आफ्नै भाग्य पत्ता लगाउने तरिका (भिडियो)
यौन मनोविज्ञान बारे जान्नै पर्ने १० कुरा
ग्रिन कार्ड कै लोभमा अमेरिकामा बच्चा जन्माउँदै नेपाली नायिकाहरु
म एआईजीको छोरा हुँ भन्दाभन्दै प्रहरीले दिए रामधुलाई
बेसार लगाएर त हेर्नुस्, तपाइको अनुहारको दागहरु विस्तारै हराउदै जान्छ
भारत शोकमा डुब्यो, इराकमा ३९ नागरिकको मृत्यु, आइ एस आइले गरेको सबैको हत्या
एक सहासी महिला,जसले बलात्कार गर्न आएका युवकलाई ओछ्यनमै छुरी हानेर मारिन